Accueil > Gazetin'ny nosy > Mahamasina: Nanao kabary politika ny filohan’ny FJKM
Mahamasina: Nanao kabary politika ny filohan’ny FJKM
Lanonana 3 sosona no notanterahan’ny FJKM na ny Fiangonan’ny Jesosy Kristy eto Madagasikara, omaly, teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina, dia ny fotoam-bavaka manokana izay nanomezana tso-drano ny filohan’ny FJKM, ny mpitandrina Irako Andriamahazosoa, ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny fotoam-piasan’ny fiangonana ho an’ny taona 2018 , ary ny fanombohana ny fankalazana ny faha 50 taonan’ny FJKM izay atao amin’ity taona ity. Tamin’ny ankapobeany, tsy dia nisy nampiavaka azy raha hoarina tamin’ireo fotoam-bavaka nataon’ny fiangonana teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina hatramin’izay ity natao omaly ity. Ny zavatra tsikaritra kosa, izay somary niteraka resabe teo amin’ireo mpanara-baovao, dia ny lahateny nataon’ny filohan’ny FJKM izay mendrika ny kabary politika ihany ny ampahany. Tao anatin’ny lahateniny dia nanainga ireo mpino rehetra ao amin’ny fiangonana FJKM mba handatsa-bato amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi. Notsipihan’ity farany fa tokony hahay hifidy ny mpino amin’io fifidianana ho avy io fa tsy sanatria hifidy olona fahatany. Olona matahotra an’Andriamanitra ary zanak’Andriamanitra no tokony ho fidiana raha tiana ny ahita ny firenena handroso, hoy ihany ny filohan’ny FJKM. Ho an’ny mpandinika sy mpamakafaka ny raharaham-pirenena, dia mazava fa resaka politika no ao ambadik’izany teny nataon’ny filohan’ny FJKM izany. Politika satria manainga ireo mpino ao aminy mba hifidy ny kandida izay zanaky ny fiangonana. Tsy vitsy amin’ireo mpanara-baovao moa no milaza fa efa karazana fampielezan-kevitra ho an’i Marc Ravalomanana no nataon’ny pasitera Irako Androamahazosoa Ammi.
Antsirabe: Teratany frantsay maty nisy namono tao an-tranony
Tsy ny Malagasy intsony ankehitriny no iharan’ny erisetra avy amin’ireo jiolahy mpamaky trano fa hatramin’ireo teratany vahiny ihany koa. Tany Antsirabe no nitranga ny tantara, Frantsay antitra iray, 70 taona, no hita faty tao an-tranony, ny alin’ny zoma hifoha ny sabotsy 20 janoary lasa teo. Raha ny fampitam-baovao avy an-toerana dia fantatra fa nisy namono ity vahiny ity satria nifatotra tamin’ny tady ny tongony sy ny tanany, ary nasesika tany am-bavany ny ba kirarony. Tsy hita tao an-tranony intsony ny vola, ny solosaina entin-tanana, ny finday, ary ny fakan-tsary. Mety midika izany fa halatra no tena nahatongavan’ireo jiolahy tao amin’ny tranon’ity teratany frantsay ity kanefa mety ho antony hafa ihany koa. Mbola eo ampanaovana ny fanadihadiana moa ny mpitandro filaminana mandray an-tanana ny raharaha, amin’izao fotoana izao. Marihana fa mipetra-drery eto Madagasikara ity frantsay maty nisy namono ity.